पुण्यप्रसादकाे पाउदन प्रेम- जीवनशैली - कान्तिपुर समाचार
पुण्यप्रसादकाे पाउदन प्रेम
हाते हार्मोनियम छरितो हुन्छ । पाउदनको पनि आफ्नै ऐतिहासिक विशेषता छ । हाते हार्मोनियम भित्रिनुअघि कलाकर्मीहरू पाउदनले नै काम चलाउँथे ।
माघ १, २०७३ सजना बराल
पुण्यप्रसाद खड्गी पाउदनवादक हुन् । उनले यो बाजा दिन नबिराई बजाउन थालेको ५५ वर्ष नाघ्यो । सिकेको सानैमा हो । बीचमा डेढ वर्ष बजाएनन् । आँखाको शल्यक्रिया गरेर घर फर्केपछि शौचालयमा लडे । उच्च रक्तचापले सतायो । हिँडडुल गर्न सकेनन् । बाजा थन्कियो ।
टंकेश्वरस्थित खड्गी निवासका ५ वटा हार्मोनियमको मात्रै कुरा गरिँदै छैन यहाँ । उनी थला परेपछि श्री भद्रकाली भजनमण्डलीको पाउदनसमेत उसै बस्यो । ‘उहाँबाहेक अरूले बजाउँदैनन्,’ मण्डलीका कोषाध्यक्ष गंगालाल खड्गीले भने, ‘हाते हार्मोनियम त थन्केका बेला कसले बजाओस् पाउदन ? पैसा दिन्छु भन्दा पनि वादक पाइँदैन ।’
कसैले नबजाएपछि भजन टोलीले पुण्यप्रसादलाई नै गुहार्‍यो । के–के सम्झेर मन मारिसकेका उनी गएको जेठदेखि फेरि जुर्मुराए । सदाझैं बिहान ४ बजे ओछयान छोड्न लागे । साढे ५ मा घरबाट निस्किए । थला पर्नुअघि एक्लै हिँड्ने उनले पछि श्रीमतीलाई साथी बनाए । ‘यसलाई लगेर के हुन्थ्यो र हुन त ?’ छेउमै बसेकी ७७ वर्षे श्रीमती, चिनीमायालाई औंल्याउँदै उनले भने, ‘तैपनि आड मिल्दो रैछ ।’
वृद्ध दम्पती झिसमिसेमै टंकेश्वर महादेवको दर्शन गरी विष्णुमतीपुल तर्छन् । परोपकार स्कुलको उकालो चढेर काष्ठमाण्डपबाट खिचापोखरी हुँदै सहिद गेट छिचोलेपछि भद्रकाली मन्दिर आइपुग्छन्, ठयाक्कै ६ बजे । ‘भजन गाउने मान्छेमा शील–स्वभाव र अनुशासन हुनुपर्छ’, पुण्यप्रसादले भने, ‘अबेला पुग्दिनँ । चाँडो फर्किन्नँ । दिन बिराएर जान्नँ ।’ थला परेको डेढ वर्षबाहेक उनले भद्रकाली नटेकेको कुनै बिहानी छैन । बिहेसमेत यही मन्दिर गरेका थिए, विसं २०११ सालमा ।
बुबा, बाउकाजी खड्गीका पालामा पेरिसबाट झिकाइएको पाउदनमा हात–गोडा चाल्दै पुण्यप्रसाद भगवान्का स्तुति गाउन थाल्छन् । उनलाई साथ दिनेको आवाज र वादन थपिएपछि भद्रकाली गुन्जिन्छ, तिख्खर धुनमा । बारैपिच्छेका भजन गाइन्छ । ६०/७० नाघका वृद्धवृद्धाको टोली ८ नबजुन्जेल चलमलाउँदैनन् । जस्तै आपत्–विपत् आइपरे पनि बिहानीको यो नित्य कर्म टुट्दैन ।
दैनिक जुट्ने ५/६ जनाको टोलीमा पुण्यप्रसाद एक मात्र सदस्य हुन्, जो कुर्सीमा बसेर गाउने/बजाउने गर्छन् । उनको बाजा छ नै त्यस्तो, भुइँमा बस्न नदिने । खुट्टाले प्याडल मार्दै पियानोझैं दुवै हातले बजाउनुपर्ने । हार्मोनियमकै प्राचीन स्वरूप हो, पाउदन । यसलाई देखेर मान्छेहरू झुक्किने गर्छन् । ‘यो सानो पियानो बिहेअघि बजाउन थालेको कि पछि ?’ नाकाबन्दीका बेला भद्रकालीमा पेट्रोल भर्न आएका एक युवाले सोधेछन् । पुण्यप्रसाद प्रश्नको आशय नबुझेर अवाक् बने ।
भजनमण्डलीमा आवद्ध वरिष्ठ वाद्यवादक भगतसिंह बागदासका अनुसार पाउदन अर्गान बाजाकै एउटा प्रकार हो । ‘हाते हार्मोनियममा एक हातले हावा भर्दै अर्कोले पर्दा थिच्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पाउदनमा खुट्टाले दम दिँदै दुवै हात पर्दामा राखिन्छ । दुइटैको धुन उस्तै हुन्छ, बजाउने तरिका मात्रै अलग हो ।’ झट्ट हेर्दा यो बाजा लुगा सिलाउने मेसिनजस्तो पनि देखिन्छ ।
भद्रकाली भजनमण्डलीका अध्यक्षसमेत रहेका पुण्यप्रसादसँग तीनवटा पाउदन छन् । घरमा भएका दुइटा इटालीबाट ल्याइएका हुन् । न्युरोडका वाद्ययन्त्र व्यापारी हार्मोनियम माइलाले झिकाएको उक्त ‘सेकेन्ड हयान्ड’ बाजा, कति वर्ष पुरानो हो यकिन छैन । पुण्यप्रसाद नै ८२ वर्ष भइसकेकाले बाजाको उमेर हिसाब लाउन गाह्रो पर्छ । ‘मेरा बाले यही बाजा बजाएका थिए’, उनी भन्छन्, ‘उहाँले बजाएको देखेरै मैले सिकेको हो । हाते हार्बिन (हार्मोनियम) भन्दा पाउदन सजिलो लाग्छ ।’
पाउदनको विशेषता के हो भने यसका पर्दा (की) हरू हात्तीका दाँतले बनाइएका हुन्छन् । दाँत दुर्लभ हुने भएकाले अचेल प्लास्टिककै पर्दा राख्न थालिएको छ । भद्रकालीको पाउदनका ४२ मध्ये १८ पर्दा सक्कली नै हुन् । बाँकी प्लास्टिकका । ‘उहाँले नबजाएपछि बाजा बिग्रेको थियो,’ मण्डलीका कोषाध्यक्ष गंगालालले भने, ‘पर्दा खिइएर गयो । सक्लली लगाउन सम्भव भएन । दस हजार खर्चेर मर्मत गर्‍यौं ।’
यो लोपोन्मुख बाजालाई पुण्यप्रसाद र उनको समूहले जतनसाथ राखेको छ । सानोतिनो मर्मत वादक स्वयंले गर्छन् । जटिलै भए न्ह्याक टोलका हार्मोनियम मिस्त्रीलाई डाक्नुपर्छ । वादकको अभावमा यो बाजा हराएर गइसक्यो । स्वयम्भूको भजनमण्डलीसँग एउटा छ भन्ने पुण्यप्रसादले सुनेका छन् । ‘यी बाजा हामी बूढाहरू बाँचुन्जेल मात्रै बज्छन् अब,’ उनले भने, ‘नाति पुस्ताले (बजाउने) चलन गरेका छैनन् ।’
बोकेर हिँड्न अप्ठयारो हुनु यो बाजाको एउटा जटिलता हो । डयाम्म बसेर आनन्दले बजाउन मिल्दैन । यसको तुलनामा हाते हार्मोनियम छरितो हुन्छ । यद्यपि, पाउदनको आफ्नै ऐतिहासिक विशेषता छ । हाते हार्मोनियम भित्रिनुअघि कलाकर्मीहरू पाउदनले नै काम चलाउँथे । यसको स्वरूप सुन्दर छ । बजाउने बेला घुँडा खुम्च्याएर बस्नु पर्दैन । दुवै हात–खुट्टाले जागिर पाउँछन् । हार्मोनियममा जस्तो एकै हातलाई धपेडी हुँदैन ।
‘प्याडल थिच्दा होस पुर्‍याउनुपर्छ,’ पुण्यप्रसादले वादन तरिका सिकाए, ‘भाँती पुर्‍याएर प्याडल मारिएन भने ताल बिग्रिन्छ । जानेर बजाएपछि चाहिँ धुनको स्तरै अर्को हुने ।’ नेवारी र हिन्दी फिल्म हेर्न रुचाउने उनी फिल्मका गीतहरू पाउदनकै लयमा गाउँछन् । ६०/७० वटा त उनका मौलिक लय नै छन् । भजनहरूमा लय भर्न उनलाई कसैले सिकाउनु पर्दैन । हिन्दी गीतलाई नेवारीमा उतार्न उत्तिकै सिपालु छन् ।
‘बिरामी भएको बेलासमेत दाइले पाउदन बजाउन छोड्नुभएन,’ बुबालाई दाइ भनेर सम्बोधन गर्ने पुण्यप्रसादकी माहिली छोरी, सुर्मिला श्रेष्ठले भनिन्, ‘हामीले पनि बजाइदिए हुन्थ्यो भन्ठान्नुहुन्छ । तर, हामीले चाख दिन सकेनौं ।’ तीन छोरा र तीन छोरीका बाबु, पुण्यप्रसादलाई कान्छा छोराबाट निकै आशा थिएछ । उनी वादनमा रुचि देखाउँथे । तर, छोरा आफ्नै कामकाजमा व्यस्त भएपछि त्यो आशा बिलायो ।
कालीमाटीस्थित टंकेश्वर मन्दिरको ठीक अगाडिपट्टिको साँघुरो गल्लीबाट छिरेपछि खड्गीको घर आइपुग्छ । तीनतले घरका दुई कोठा भाडामा दिइएको छ । बाँकी ‘अंशबन्डा’ गरिएका छन्, छोराहरूबीच । पहिलो फ्लोर उक्लिनासाथ पुण्यप्रसादको बेडरुम देखिन्छ । बेडरुम पुरानो घडी पसलजस्तै छ ।
भित्ताभरि जापानी, चिनियाँ, बेलायती घडीका अनेक नमुना झुन्डयाइएका छन् । साना अलार्म क्लक र पेन्डुलम वाच त कति हो कति । ब्याट्रीबाट चल्नेभन्दा हप्ता–हप्ता दिनमा दम दिनुपर्ने घडी धेरै छन् । यस्तै दमवाला एउटा घडी भद्रकाली मन्दिरको भजन पाटीमा पनि राखिएको छ ।
पुण्यप्रसादको कोठामा बस्दा घडीको स्यार–स्यार आवाजले निकाल्ने एकतमासको धुन सुन्न पाइन्छ । बेला–बेला घडीहरू टयार्र–टुरर्र, झ्याइँ–झुइँ बज्न थाल्छन् । ‘पाहुना कहिलेकाहीँ तर्सिन्छन् पनि’, सुर्मिलाले भनिन्, ‘घडीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ हाम्रो दाइ । हप्तैपिच्छे दम दिँदै बस्नुहुन्छ ।’
पुण्यप्रसादको असली पेसा घडी मर्मत गर्ने हो । भीमसेनथानमा उनको पसल थियो । अहिले छोराले चलाउँछन् । आँखा नबिग्रिउन्जेल उनले घडी बनाइरहे । बिग्रेका घडी मर्मत गर्ने मात्र होइन, नयाँ घडी बनाउनसमेत खप्पिस ! ‘हार्मोनियम बजाउन र घडी बनाउन सँगसँगै जानेको हुँ,’ उनले भने, ‘दुवैको बराबर माया लाग्छ ।’
उनका बाजे, कुलमान मास्टरले दस कक्षा पढेका थिए । तर, जागिर पाएनन् । ‘अछुत जात भनेर बाजेलाई राणाकालमा जागिर दिएनछन्,’ पुण्यप्रसादले भने, ‘पढेर पनि काम नपाएपछि बाजेले मेरा बाहरूलाई पढ्नै दिनुभएन । बाले मलाई पढाएनन् ।’ पुण्यप्रसादले पनि छोराछोरीलाई उति पढाएनन् । सबैले १० सम्म पढेका छन् । पढाउनुभन्दा इलम सिकाउनपट्टि लागे ।
‘हाम्रो जीउलाई चाहिने भनेको परिश्रम नै रैछ,’ बिरामी भएर डेढ वर्ष थन्किँदा पुण्यप्रसादलाई आभास भएछ, ‘जीउ त रबरजस्तै पो रहेछ । तन्काए तन्किने, नतन्काए खुम्चिने । खुम्च्याएर किन राख्नु भनेर यो उमेरमा पनि जोश देखाउँछु ।’ अब सकुन्जेल भद्रकाली गएर पाउदन बजाइराख्ने सोच बनाएका छन् । कोही सिक्न आए ८० नाघेका यी वादक सिकाउन तम्तयारै छन् ।
प्रकाशित : माघ १, २०७३ १५:३०
चिनियाँ फुटबल क्रान्ति
पछिल्लो एक दशक रोनाल्डो र मेसीको वरिपरि विश्व फुटबल घुमेको छ । चिनियाँ क्लबहरू यिनै दुई खेलाडी किन्न तयार छन् । उनीहरू यसका लागि कीर्तिमान रकम तिर्न पनि तयार छन् ।
माघ १, २०७३ हिमेश
न त क्रिस्टियानो रोनाल्डोले रियल म्याड्रिड छाड्नेछन् । न लियोनल मेसी बार्सिलाना बिर्सेर कतै जानेछन् । समय समयमा उनीहरू आफ्ना क्लबसँग रिसाए भन्ने खबर नआएको पनि होइन । ती प्राय: गसिप खाले समाचार मात्र हुने गर्छन् ।
आखिरमा यी दुई खेलाडीलाई किन्न सक्ने क्षमता अरू क्लबमा हुनु पनि त पर्‍यो । पछिल्लो एक दशक यिनै दुई खेलाडीको वरिपरि विश्व फुटबल घुमेको छ । रोनाल्डो उत्कृष्ट भएको वर्ष मेसी दोस्रोमा हुन्छन् । मेसी अगाडि रहँदा उनका पछाडि रोनाल्डो ।
साँच्चै यी दुई खेलाडीले अहिलेको क्लब छाड्ने हो भने नयाँ कीर्तिमान बन्ने पक्का छ, खेलाडी किनबेचको भाउमा । अहिले तत्काल विश्वका सबैभन्दा महँगा फुटबल खेलाडी हुन्, फ्रान्सेली मिडफिल्डर पउल पोग्बा । म्यानचेस्टर युनाइटेडले उनका लागि नौ करोड ३२ लाख पाउन्ड तिरेको थियो । विश्वास नहुन सक्छ, चिनियाँ क्लबहरू यिनै रोनाल्डो र मेसी किन्न तयार छन् । उनीहरू यसका लागि कीर्तिमान रकम तिर्न पनि तयार छन् ।
रोनाल्डोका एजेन्ट हुन्, जर्जी मेन्डेस । यिनै मेन्डेसका अनुसार एउटा चिनियाँ क्लबले रोनाल्डोका लागि रियललाई ३० करोड युरो तिर्न तयार छ । अनि तलब वर्षको दस करोड युरो । मेन्डेसले यति मात्र भने, ‘पैसा नै सबथोक होइन ।’ रोनाल्डोले रियलबाट वर्षको चार करोड २० लाख युरो कमाउने गर्छन् ।
मेसीलाई किन्न इच्छुक क्लबको त नाम नै बाहिर आएको छ र यो हो, हेबेई चाइना फोर्चुन । यो क्लबले मेसीलाई बर्सेनि ८ करोड पाउन्ड तलब दिन्छु भनेको छ । लगभग रोनाल्डो बराबरकै । मेसीमा रुचि देखाउने क्लबका प्रशिक्षक हुन्, म्यानुएल पिलेग्रेनी । पिलेग्रेनी तिनै हुन् जसले यसअघि म्यानचेस्टर सिटी र रियलजस्ता क्लबको व्यवस्थापन पनि सम्हाले ।
साँच्चै चिनियाँ क्लबहरूसँग कति पैसा छ त ? कि खालि बजार तताउन खोकिरहेका मात्र छन् ? चीन दिनदिनै धनी भइरहेको छ । त्योभन्दा पनि धनी भइरहेका छन्, चीनका खास–खास व्यापारी । यिनै व्यापारीको पछिल्लो महँगो सोख बनेको छ, फुटबल क्लब चलाउने । केही दिनअगाडि मात्र हो, चीनको सबैभन्दा चल्ने अखबार ‘चाइना डेली’ ले अगाडि नै एउटा सम्पादकीय छाप्यो र यो खुबै चर्चित पनि बन्यो । त्यस सम्पादकीयमा भनिएको थियो, ‘क्लबहरूले विदेशी खेलाडीलाई धेरै खर्चिनु पनि ठीक होइन । होस गर्नुपर्छ ।’ चाइना डेलीले त्यही बोल्छ, जुन त्यहाँको सरकार चाहन्छ । त्यसैले उसको सम्पादकीयबाहिर केही दिनमै चिनियाँ सरकारले एउटा क्लबबाट कति विदेशी खेलाडी खेलाउन पाउने हो त्यसबारे नियम बनाउने समाचार पनि आयो ।
ठीक यही समाचार आउँदा केही चिनियाँ क्लब इङ्लिस कप्तान वायन रोनीप्रति पनि उत्सुक भएको तथ्य बाहिर आयो । नाम नखुलेका दुई क्लबले रोनीलाई साताको सात लाख पाउन्ड तलब दिने प्रस्ताव राखेको थियो । बेलायती मिडियाको अनुमानमा त्यो क्लब सम्भवत: ग्वान्जाउ एभरग्रेन्ड टोबाओ वा बेइजिङ ग्वान हो । म्यानचेस्टर युनाइटेड स्टार रोनीले यो प्रस्तावमा ‘हो’ भनेको भए, उनी बन्थे, विश्वकै सर्वाधिक कमाउने फुटबल खेलाडी ।
अचेल कुनै चिनियाँ क्लबले यस्तो प्रस्ताव राख्दा, ‘होइन’ भनेर विश्वास नगर्ने ठाउँ पनि छैन । जस्तो, सांघाई एसआईपीजीले चेल्सीका ब्राजिली खेलाडीका लागि कीर्तिमानी छ करोड पाउन्ड तिर्‍यो । ओस्कारको तलब थियो, साताको पाँच लाख पाउन्ड । यस अनुबन्धसँगै उनी विश्वमा सर्वाधिक कमाउने शीर्ष पाँच खेलाडीमा परे । जबकि, चेल्सीमा छँदा उनी सुरुआती टिममा पर्न संघर्षरत थिए । चेल्सी प्रशिक्षक एन्टोनिया कोन्टेले उनलाई खासै मन पराएका थिएनन् ।
जति बेला ओस्कार चीन जान तयार भए, कोन्टे एकपल्ट नराम्रोसँग झस्किए । ओस्कार उमेर ढलेका खेलाडी पनि त थिएनन् । अनि कोल्टेले भनिहाले, ‘यस्तै हो भने हाम्रा क्लब राम्रा खेलाडीलाई टिममा राखिरहन पनि गाह्रो हुन्छ ।’ त्यसो त इङ्लिस प्रिमियर लिगलाई पनि आरोप छ, बढी तलबको लोभ दिएर खेलाडी भित्र्याउने । त्यसैले लिभरपुलका प्रशिक्षक योर्गन क्लोप पनि भनिहाले, ‘खेलाडीले जहाँ बढी पाउँछन्, त्यहीं जान्छन्, यस्तै आरोप प्रिमियर लिगलाई पनि त छ ।’
यी कोन्टे र क्लोपले जे भने पनि युरोपकै लागि पनि चीन बिस्तारै फुटबलमा ठूलो प्रतिस्पर्धी बन्दै छ । ओस्कारले पनि चीन पुगेयता भनिहाले, ‘चिनियाँ क्लबबाट खेल्ने त मेरो सपना नै हो ।’ यसैबीच अर्का हाइप्रोफाइल खेलाडी कार्लोस टेभेज पनि चीन पुगे, सांघाई सेन्ह्वाबाट खेल्न । उनले अनुबन्ध गरेको तलब थियो, साताको छ लाख १५ हजार पाउन्ड । यो अनुबन्धसँगै उनी विश्वकै सर्वाधिक कमाउने फुटबल खेलाडी बने । दुवै म्यानचेस्टर क्लबबाट खेलेका टेभेज चीन जान ठीक अगाडि अर्जेन्टिनाको बोका जुनियर्समा थिए ।
त्यहाँ छँदा उनको तलब चीनका कमाउने पारिश्रमिकको छेउछाउ पनि थिएन । बोका जुनियर्सका लागि खेलेको अन्तिम खेलमा टेभेजलाई हेर्न हजारौं दर्शक मैदान पुगेका थिए र उनीहरूको एउटा मात्र नारा थियो, ‘कृपया सके चीन नजाऊ । यतै बस ।’ टेभेज ती समर्थकका भावना बुझ्न सक्ने स्थितिमै थिएनन् । भर्खर विवाह गरेका थिए, आफ्ना किशोर अवस्थादेखिकै प्रेमिकासँग । उनलाई पनि धेरै कमाउनु थियो । टेभेज त चीन जान हतारोमा थिए ।
यी सबबीच गम्भीर प्रश्न, के चिनियाँ फुटबलले अरू पारम्परिक शक्तिलाई चुनौती दिंदै छ त ? चिनियाँ फुटबल आफैंमा स्तरीय छैन, अहिलेसम्म एकैपल्ट मात्र विश्वकप खेलेको देश हो यो । अझै पनि चीनमा युरोप र दक्षिण अमेरिकाको जस्तो फुटबल संस्कृति पाइन्न । तर हुन सक्छ, यी सबै परिवर्तनको बाटोमा छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति आफैं फुटबलमा खासै पारखी हुन् । उनी चाहन्छन्, चीन फुटबलमा महाशक्ति बनोस् । सायद त्यहाँका व्यापारीले सीकै बाटो पछयाइरहेका छन् ।
केही ठूला खेलाडीका लागि चीनमा खेल्न जानु पेन्सन पकाउनुजस्तो पनि हुन सक्छ, जस्तो निकोलस एनेल्का, डिडिएर ड्रोग्बा । यो त पुरानो सोच भयो । अहिले नै केही युरोपेली र दक्षिण अमेरिकी खेलाडीले चीनमा खेल्नुलाई गम्भीर मान्न थालिसकेका छन् । चीनमै खेलिरहेका खेलाडी पनि ब्राजिली राष्ट्रिय टिमको महत्त्वपूर्ण सदस्य हुन सक्छ भने धेरै चिन्ता लिएर पनि केही हुन्न, सायद यस्तै सोच विकास हुँदै छ । अनि यो नै विश्व फुटबलमा चिनियाँ क्रान्ति हो कि ?